३ महिना देखि हराईरहेकी कमला र श्रीमानको भयो भेट, जे भयो भयो हिंड घर जाऊँभन्दा मानिन् कमला, आखिर किन ? यस्तो रहेछ कारण (भिडियोसहित) – Khabaarpati
January 4, 2021 January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on ३ महिना देखि हराईरहेकी कमला र श्रीमानको भयो भेट, जे भयो भयो हिंड घर जाऊँभन्दा मानिन् कमला, आखिर किन ? यस्तो रहेछ कारण (भिडियोसहित)
दाङ्ग । विगत तीन महिना अघिदेखि हराई रहेका जोडीको भेट भएको छ । श्रीमान भारतमा काम गर्न गएको बेला श्रीमती कमला भने घर छाडेर गएकी थिईन् । उनी आफ्नो सन्तानलाई बिचल्ली बनाएर किन घर छाडेर गएकी थिइन् भन्ने कुरा उनले खुलेर भनेकी छैनन् । उनले घर छाड्नेबेला उनका श्रीमान जीवराज घरमा थिएनन् । श्रीमान घरमा नभएको बेला आफ्ना दुई सन्तानलाई चट्क्कै छाडेर घर छाडेर गएकी थिईन् कमला ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,